[SAWIRO]Baydhabo oo lagu qabtey Munaasabada 76aad ee ka soo wareegatey Aas aska Ciidanka Booliska Soomaaliyeed | Radio Baidoa
Guriga Wararka Maanta Baydhabo oo lagu qabtey Munaasabada 76aad ee ka soo wareegatey Aas aska...
[SAWIRO]Baydhabo oo lagu qabtey Munaasabada 76aad ee ka soo wareegatey Aas aska Ciidanka Booliska Soomaaliyeed
Gudoomiyaha Barlamaanka KGS Oo ka qeyb galay Munaasabad lagu Xusayay 76 sano guuradii ka soo wareegatey aas aaskii Ciidanka Booliiska Soomaaliyeed Oo maanta Baydhabo lagu qabtey.
Magaalada Baydhabo ayaa maanta lagu qabtey Munaasabad loogu daabaal dageyey Xuska Sanadguuradii 76aad ee ka soo wareegatey Aas aska Ciidanka Booliska Soomaaliyeed,waxana Ciidamada Booliska gaada ka cayaar kusoo mareen waddoyinka weyn ee Magaalada Baydhabo.
Intaas ka dib Munaasabad kooban oo loogu hambalyeynayo Ciidanka Booliska ayaa lagu qabtey Xaruunta Ciidanka Booliska kgs ,Waxana ka soo qeyb galey Guddomiyaha Baarlamanka KGS ,Xildhibaano Ka tirsan Baarlamanka Soomaaliya ,Wasiiro ,Saraakiisha Ciidamada qeybahooda kala duwan,Maamulka Gobolka Baay iyo kan Degmada Baydhabo .
Ugu horeyn waxaa halkaasi ka Hadley taliyaha ciidanka Booliska Gobolka Baay,Gaashanle Dhex Aamin Mad daruur Iyo taliyaha ciidanka Booliska KGS Gaashanle sare Mohamed ibdow ibrow waxana ay ka Hadleen sida Ciidanka Booliska Haben iyo Maalin ugu taagan yihiin sugida Ammaanka.
Guddomiyaha Baarlamanka Koonfur Galbeed Mudane Abdulkadir Shariif Sheekhuna Maye oo ugu dambeyn Munaasabada ka Hadley ayaa ugu horeen hambaliyo iyo Bogaadin udirey Ciidanka Booliska Soomaaliyeed wuxuna Bulshada iyo Ma’uliyiinta ka soo jeeda Deeganada KGS kula dar daarmey in ay mar waliba ka shaqeyaan jiritaanka iyo horumarka Dowlad Goboleedka KGS,oo uu sheegey in ay tahay mid dhamaanteena Waajib naga saarantahay.